Kungani bengaqhakanjiswa laba baqeqeshi? - Bayede News
Kuvamisile ukutuswa kwamaqhinga omqeqeshi uma usomankomane enqobe isicoco. Okuhlalukayo nokho ukuthi umqeqeshi usuke engawenzanga yedwa umsebenzi. Kunabantu abasebenza eduze naye umqeqeshi abalekelela ngezindlela ezahlukene. Omunye ugxila ekuvaleni inxeba elivuleka esweni likasomankomane kanti ngokolwimi lwesibhakela lowo mqeqeshi ubizwa ngocutman. Omunye usuke eyidlale kudala indima yakhe ngokuthi acije usomankomane abe qatha. Okuvamise ukwenziwa umqeqeshi ukukhomoza nokuthethisa usomankomane uma engayilandeli imiyalelo yakhe. Ukunganakwa kwamagalelo alaba baqeqeshi kufakazelwa nawukungaphakanyiswa kwamagama abo uma kwenziwa imcimbi yokuklomelisa abenze kahle kumaBoxing South Africa Awards. UVusi “Iron Tiger” Mtolo noKenneth “Mr Jones” Mabunda bangabanye babasizi babaqeqeshi abangakutholi ukuduma nokunconywa yize benza umsebenzi omqoka ngokufanayo nowenhloko.
La madoda asebenza eHotbox Gym eseGlanhazel eGoli aholwa umqeqeshi uCollin Nathan. Ngaphambi kokusebenza noMtolo, uMabunda usebenze iminyaka noNick “Mthakathi” Durandt owadlula emhlabeni esekhiqize inqwaba yompetha bezicoco zakuleli nezomhlaba. Phakathi kompetha abadlula ezandleni zikaMabunda kubalwa u-Innoncent Mthalane, uPhillip “Time Bomb” Ndou‚ uCassius “Shy Guy” Baloyi‚ uSilence “Real Deal” Mabuza, uJoseph “Smokin’ Joe” Makaringe, uLucky “Babawazo” Lewele‚ u-Isaac “The Angel” Hlatshwayo‚ uJacob “9mm” Mofokeng‚ uJeffrey “Mongoose” Mathebula‚ uMalcolm “The Stone” Klassen‚ uSiphiwe “Golden Master” Nonqayi noMasibulele “Hawk” Makepula. UMoruti, owafica uMabunda esitebeleni sikaDurandt, akawuvali umlomo ngeqhaza elibanjwe yile nsizwa edabuka eLimpopo.
Uyibekile induku ebandla uMathebula
“Ngikhumbula ngifika eGoli ngiziqhamukela eThekwini ngowezi-2003, uMabunda wangifundisa izinto eziningi ngesibhakela. Nguye owathi angigxile ekufakeni umoya uma ngiziqeqesha. Ingakho ngihlale ngiqatha ngokwanele ezimpini zami. Mina noma ngabe silwa imizuliswano engaphezulu kweli-12, ngingalwa kuze kuse ngoba ngafundiswa uMabunda ubumqoka bokungenzi ngokwanele uma ujima,” kusho uMthalane, ongumpetha we-IBF esisindweni seFlyweight. UMtolo, owasinda ngemuva kokugwaza ngakubo eClermont, useneminyaka eli- 18 esebenza noNathan. Ibona abenze uMthalane waba ngumpetha womhlaba ihlandla lesibili kanti basebenze ngokuzikhandla ukusondeza u-Azinga Fuzile noSimphiwe Konkco eduze kwamabhande omhlaba. UKonkco uhluleke ekugcineni ukubuya nesicoco seWBC Straweight kanti uFuzile wahlulwa empini yokuhlungela ukulwela isicoco se-IBF kuJunior Lightweight.
UMtolo noNathan babesekhoneni likaHekkie Budler ngesikhathi egila izimanga ebuya namabhande eWBA nele- IBF eJapan ngowezi-2018. Yize esesebenze kangaka uMtolo, akakufihli ukuthi kunabantu abangawunaki umsebenzi wabo. “Ingiphatha kabi le nto yokunganakwa kwethu kodwa ayikho into engingayenza ngaphandle kokuqhubeka nokusebenza kanzima. UCollin ungumuntu osikhonzile isibhakela, uhlale njalo efunda izinto ezintsha. Mina ngimsiza ngokuqikelela ukuthi osomankomane bangumqemane uma sekufika usuku lwempi,” usho kanje. Ngaphandle kokusiza uNathan, uMtolo unabanye osomankomane abathathu ayimeneja yabo. Uphethe uFrance Ramabolu ongumpetha weWBA Pan Africa ne-IBF Continental Africa Junior, uBoyd Allen oke waba umpetha weWBA Pan Africa Middleweight noRoarke Knapp.